Otu esi emepụta onye na - azụ ahịa: usoro ị ga - emerịrị | ECommerce ozi ọma
Were ya na ị mepụtara azụmahịa n'ịntanetị, ụlọ ahịa nke ị tinyela nrọ na ego gị niile, na ihe ịchọrọ bụ na ha zụtara gị ọtụtụ ihe. Mana ọ bụrụ na anyị ajụọ gị onye ezigbo onye ahịa ahụ bụ, ị nweghị nnukwu echiche ma ị zaa n'ụzọ ọ bụla na onye ọ bụla. Nke a na-egosi na ị kọwaghị ndị ahịa gị, ya bụ, ị maghị ka esi mepụta onye zụrụ ahịa.
El onye na-azụ ahịa ihe bụ ihe dịka nnọchite anya onye ezigbo onye ahịa gị ga-abụ, onye ka ị ga-elekwasị anya n'usoro ahia gị niile iru ya. Ma gịnị kpọmkwem bụ onye na-azụ ahịa ahụ? Kedu ka ị ga - esi mepụta onye na - azụ ahịa? Ha a na-eje ozi n’ezie iji zụlite usoro azụmaahịa? Anyị chọrọ ịgwa gị okwu gbasara ihe a niile na ọtụtụ ndị ọzọ n’okpuru.
1 Gịnị bụ asịwo onye
2 Kedu ihe kpatara imepụta onye zụrụ ahịa
3 Otu esi emepụta onye zụrụ ihe site na nzọụkwụ
3.1 Kọwaa ihe ndị dị mkpa
3.2 Nkọwapụta onye zụrụ gị
3.3 Chọpụta ike na adịghị ike gị
3.4 Mepụta onye zụrụ gị
Gịnị bụ asịwo onye
Tupu ịmara otu esi emepụta onye zụrụ ahịa, ọ dị ezigbo mkpa ịmata ihe anyị na-ezo aka n'echiche a ma ghọta ya dị ka o kwere mee. A asịwo persona bụ a «asịwo persona», ma ọ bụrụ na anyị ga-asụgharị ya ozugbo.
Ọ bụ njirimara nke ihe anyi nwere ike ichota di nma nye anyi. Yabụ, na dị ka Hubspot, ọ ga-abụ "a ọkara akụkọ ifo na-anọchi anya gị ezigbo ahịa."
N'ihi na ọ dị mkpa? Ọ dị mma, chee na ị ga-emepe ụlọ ahịa ihe eji egwuri egwu n'ịntanetị. O doro anya na ndị ahịa gị bụ ụmụaka, mana nke ahụ ọ bụ eziokwu? Ọ bụ ezie na ngwaahịa gị lekwasịrị anya n’obere ụlọ, nke bụ eziokwu bụ na onye na-azụ gị abụghị ụmụaka, kama ọ bụ nne na nna ụmụaka ahụ, ndị ga-abụ ndị zụtara gị. Yabụ, mgbe ị na-ewepụta usoro, ịgaghị ịdabere na ide "maka ụmụaka" kama "maka ndị nne na nna."
Ihe nlere ahu emere ka emee ozi gbasara ezigbo ndị ọrụ, ịmata otú ha si akpa àgwà na ngwaahịa ị tinyere n'ahịa, ọ bụrụ na ha masịrị ha, ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụrụ na ọ dị mma ịkụ nzọ na ha, wdg. N'ezie, ozi ị ga - enweta bụ: data igwe mmadụ, ọnọdụ onwe gị, omume banyere ịzụta, wdg.
Kedu ihe kpatara imepụta onye zụrụ ahịa
Ugbu a ị matara nke ọma gbasara echiche a, ị nwere ike ịnọ na-eche ihe kpatara ị ga-eji kee ya. Ma n’agbanyeghi na o doghi gi anya ma odi ezigbo nma ma obu na odighi, ma o bu otu esi eme ya, odi nkpa onye zuru ahia no ebe a, o di adi. Ọ bụghị naanị na ọ na - enyere gị aka ịkọwapụta atụmatụ gị, mana ọ na - eme ka mbọ gị niile na - aga n’usoro ndị na - ege gị ntị nwere, ya bụ, ndị nwere ike ịmasị karịa ihe ị na - ere.
Ma, na mgbakwunye na nke ahụ, ị ​​ga-enweta:
Nye ndị ahịa gị ọdịnaya zuru oke. Ọ bụghị otu ihe ka ị gakwuru ndị ntorobịa karịa nke okenye, ma ọ bụ nke okenye.
Kọwaa usoro mmekọrịta gị na ndị ahịa. N'okwu a, ị ga-enwe ike ịmepụta otu esi adọta, kwenye ma jigide onye ahịa ahụ. Ga-eme ya naanị ma ọ bụrụ na ị “na-asụ otu asụsụ.” Anyị anaghị ekwu maka eziokwu nke ịsụ otu asụsụ, kama ọ bụ na ị ghọtara mkpa onye ahịa ahụ yana ị na-enye azịza maka ihe ha na-achọ.
Ga-enwe igodo iji mata nke nkwukọrịta ọwa iji. Ìgwè mmadụ ọ bụla na-anọkarị n’otu ebe ma ọ bụ n’ebe ọzọ. Yabụ, ịmara ụzọ mgbasa ozi ị ga - eji mee ihe ga - enyere gị aka ịghara igbu oge na ndị na - adabaghị, ma ọ bụ na onye ị na - azụ ahịa nọ naanị ntakịrị.
Azụmaahịa gị niile ga-elekwasị anya na onye ahịa gị. Ọ pụtaghị na ị gaghị erere ndị ahịa ndị ọzọ; mana ọ bụ eziokwu na "grosso" gị ga-abụ nke a, ya mere, akara gị niile ga-achọ inwe ọmịiko na onye ahụ, onye zụrụ ahịa nke gosipụtara akara ahụ (ọ bụ ụzọ kachasị mma iji nweta iguzosi ike n'ihe).
Otu esi emepụta onye zụrụ ihe site na nzọụkwụ
Agbanyeghị na ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume, onye ọ bụla nwere ike ịmepụta onye na-azụ ahịa persona. Iji mee nke a, enwere usoro nke ị ga-eburu n'uche ka nsonaazụ ya kachasị bụrụ nke kwesịrị ekwesị. Ndị a bụ:
Kpọmkwem, anyị na-ekwu maka mkpa ndị ị nwere maka ndị ahịa gị. Nke ahụ bụ, gịnị ka ịchọrọ ịma banyere ha. O nwere ike bụrụ na naanị ihe ị ga-ama bụ ma ha bụ nne na nna, ma ha alụghị di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ na ha alụọla, afọ ha, wdg. Ọ bụ eziokwu na ozi ndị ọzọ ka mma, ị kwesịkwara ilekwasị anya naanị na data ndị kachasị mkpa.
Na otu esi enweta data ahụ? Ọfọn maka nke a ị nwere ike guzobe otu ndi gi na ha achoputa ihe ohuru gi. Nhọrọ ọzọ bụ ịkpọ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nnakọta data ma nweta ha dabere na ebumnuche gị.
Nhọrọ ọzọ bụ ịnakọta ozi ahụ n'aka ndị ahịa gị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-emepụta nchekwa data na ndị ọrụ nwere ike, na mgbakwunye, ị nwere ike iwulite ntụkwasị obi (n'ihi na ọ bụrụ na ha zụtara gị otu oge, ha nwere ike inwe mmasị na nke ọzọ).
Nkọwapụta onye zụrụ gị
Ugbu a ị nwere ozi niile ịchọrọ iji mepụta onye na-azụ gị. Mana ọ bụ "raw" ọmụma. Ugbu a ị ga-amarịrị isi ihe dị na ozi ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu maka ịkọwapụta ihe njirimara onye ahịa ahụ nwere.
Chọpụta ike na adịghị ike gị
Ozugbo ị kọwapụtara onye zụrụ gị, ọ dị mkpa ịmata, maka azụmahịa gị, ihe ị ziri ezi na ihe ị na-emehie. Ga- guzosie ike kedu ihe ahịa gị na adịghị ike gị, nke ahụ bụ, isi ihe ndị ahụ ị ga-agbanwe ihe ka ọ bụrụ na ndị ahịa ka afọ ju gị.
Mepụta onye zụrụ gị
Ugbu a, ị ga - achịkọta ozi niile ị ga - emecha. Enwere ọtụtụ ndebiri ị nwere ike iji nyere gị aka ịhụ ihe dị gị mkpa n'ezie, yabụ ọ bụrụ na ịmebeghị ya mbụ, ịnwere ike iji ha mee ihe n'oge ole na ole.
Ma cheta, onye zụrụ ahịa abụghị ihe "kwụsiri ike" kama ọ na-agbanwe. A ga-enwe oge mgbe ị ga - agbanwe ma ọ bụ rụgharịa echiche a ka ị nwee ike imeghari na mgbanwe ndị na - ebilite. N'ezie, ọ nwedịrị ike ịbụ na ị guzobere onye na-azụ ahịa na otu ọhụụ dị ike karị na-apụta na azụmaahịa gị, yabụ ị ga-emegharị usoro gị iji lekwasị anya na nke nwere ike inye gị ọtụtụ elele.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Otu esi emepụta mmadu ahia